Filipina: Valan-dresaka Ho an’ny Mpanao gazety Antserasera Voalohany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Novambra 2017 8:19 GMT
(Marihina fa tamin'ny 26 septambra 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nisy ny valan-dresaka an-gazety antserasera, voalohany tamin'ny tantaran'ny aterineto tao Filipina natao ny 21 Septambra tamin'ny fankalazan'ny Filipiana ny faha-34 taonan'ny Lalàna Miaramila.
Notarihan'ireo solontenan'i Satur Ocampo, mpanao gazety teo aloha sady gadra politika ny fifanakalozan-kevitra an-tserasera. Nitatitra ny hetsika, izay nohamorain'i Yehey! , vavahadin-tserasera ao Filipina, ny mpanao gazety avy ao Filipina, Hong Kong, Aostralia ary Etazonia.
Niresaka momba ny mampiavaka ity hetsika ity i Babelmachine, iray amin'ireo bilaogera izay nitatitra ny fifanakalozan-kevitra antserasera:
“What makes this online press conference particularly significant is that it's another example of how technology can be used to encourage political discourse and safeguard freedom of expression. It's particularly apt considering that Martial Law sought to curtail these freedoms.”
“Ny manamarika ity valan-dresaka an-tserasera ho an'ny mpanao gazety ity dia ny maha ohatra iray hafa amin'ny fomba handrisihan'ny fampiasana teknolojia hanaovana kabary politika sy fiarovana ny fahalalaham-pitenenana. Tena tsara ny manamarika manokana fa mikasa ny hametra ireo fahalalahana ireo ny Lalàna Miaramila.”
Avy eo izy nitantara ny fomba nitrandrahana ny teknolojia teo amin'ny politika maoderin'i Filipina :
“After all, the Philippines has seen many instances when technology was used as a tool to empower the public, such as the online demonstrations against the corrupt administration of former President Joseph Estrada, and the text brigade that rallied Filipinos to the second Edsa People Power revolution in 2001.”
“Raha ny marina, nahitana tranga maro teto Filipina rehefa nampiasaina ny teknolojia mba ho fitaovana hankaherezana ny vahoaka, toy ny fihetsiketsehana antserasera manohitra ny kolikolin'ny fitondran'ny filoha teo aloha Joseph Estrada, ary ny hafatra fanafihana izay namory ireo Filipiana tamin'ny revolisiona Edsa People Power faharoa tamin'ny taona 2001.”
Namintina ireo olana nipoitra nandritra ny fifanakalozan-kevitry ny fampitam-baovao niaraka tamin'ny Solombavambahoaka Ocampo i Bryanton Post mpanao gazety iray hafa izay nitatitra ny hetsika. Nodinihina manokana ny fanonganam-panjakana tao Thailandy, indrindra fa ny fiantraikany tamin'i Filipina:
“According to Ka (Comrade) Satur, the Philippines has a different political dynamics and historical experience from Thailand. “But what must be noted that the problems that plagued Thaksin were the same as those that beleaguered (President) Gloria M. Arroyo – issue of legitimacy, corruption, political repression.” He added however that a military resolution of these issues is not the way, adding that the military played a big role in Arroyo’s sins against the people.”
“Araka ny filazan'i Ka (namana) Satur, manana sehatra ara-politika hafa sy zavatra niainana ara-tantara hafa amin'i Thailandy i Filipina. “Saingy tsy maintsy marihana fa mitovy tamin'izay nanaovana fahirano ny (Filoha) Gloria M. Arroyo ireo olana izay nanakorontanana an'i Thaksin – olana momba ny maha-ara-dalàna, ny kolikoly, ny famoretana ara-politika”. Nanampy anefa izy fa tsy lalana ny famahana ara-miaramila an'ireny raharaha ireny, ary nampiany hoe nandray anjara lehibe tamin'ny fahotana nataon'i Arroyo tamin'ny vahoaka ny miaramila . “
Nitantara ny olana voalohany tamin'ny valan-dresaka an-gazety sy ny fientanentanan'ny rehetra izay nandray anjara tamin'ity hetsika manan-tantara ity ihany koa i Tonyo, mpikambana ao amin'ny Parlemantan'i Filipina .
Namaritra izany ho “revolisionan'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety” ireo bilaogera hafa izay nanoratra momba ny fifanakalozan-kevitra antserasera Challenge and Movements , ary naneho hevitra i Cyberbaguioboy sy Manuel L. Quezon III fa tena “fanandramana mahaliana” izany.
Nanjary bilaogera i Atoa Ocampo tamin'ity taona ity rehefa voatery nitady fiarovana izy tao amin'ny tranoben'ny Parlemanta satria nandrahona hisambotra azy ny polisy miaraka amin'ireo Solons liam-pandrosoana miisa dimy hafa noho ny “fikasana hanongana ny governemanta.” Vakio ny mombamomba ilay bilaogera .
9 ora izayFilipina